देश को हरेक नागरिक गर्न बेलारुस Lukashenko Aleksandr Grigorevich को पहिलो र केवल अध्यक्ष एउटा उदाहरण र ठूलो अख्तियार छ। जसको लागि उहाँले यति रुचाउनु थियो? किन मान्छे 20 वर्ष को लागि जाँदै गरिसकेका एउटै व्यक्ति गर्न राज्य सरकार भरोसा गर्छन्? यस लेखमा वर्णन गरिने जीवनी Lukashenko Aleksandra Grigorevicha "युरोप अन्तिम तानाशाह", तपाईंले यी जवाफहरू र धेरै अन्य प्रश्नहरू फेला पार्न मद्दत गर्नेछ।
भविष्यमा राष्ट्रपति को बाल्यकाल
जन्मदिन Lukashenko Aleksandra Grigorevicha 1954 मा एक साधारण गर्मी दिन थियो। यो ओरशा जिल्ला, Vitebsk क्षेत्रमा गाउँमा Kopys मा भयो। हाल सम्म उहाँले जन्मेको अगस्ट 30, अलेक्जेन्डर Lukashenko विश्वास थियो। यो अलेक्जेन्डर जी 31 अगस्ट को रात मध्यरात पछि जन्मेको चिनिन रूपमा जन्म, 2010 मा संशोधित थियो। 30 अगस्ट - जब यो केही कारण मिति दर्ता भएको थियो। अब Lukashenko 31 अगस्ट मा जन्मदिन celebrates भन्ने तथ्यलाई बावजुद, डाटा आफ्नो पासपोर्ट मा नै बाँकी छन्।
उहाँले अझै पनि धेरै युवा हुँदा अलेक्जेन्डर आमाबाबुले छोडपत्र, त्यसैले छोराको शिक्षा पूर्णतया मेरी आमाको काँध मा राखिएको छ - Ekateriny Trofimovny। युद्ध समयमा, त्यो उनको स्नातक ओरशा जिल्ला सारियो र सन मा काम पायो पछि, अलेक्जेन्ड्रिया को गाउँमा बस्थे। छोरा क्याथरीन Trofimovna को जन्म पछि फेरि उनले आफ्नो मूल गाउँ फर्के Mogilev क्षेत्र। उनको बुबा Lukashenko Aleksandra Grigorevicha बारेमा जीवनी जानकारी अनिवार्य निःशुल्क छ। हामी मात्र उहाँले एक बेलारूसी थियो र वानिकी काम भनेर थाह छ। हामी पनि आफ्नो आमाको छेउमा हजुरबुबा Lukashenka युक्रेन को सुमी क्षेत्र आए भनेर थाह छ।
शिक्षा र प्रारम्भिक काम
1971 मा - उच्च स्कूल पछि - Lukashenko Aleksandr Grigorevich Mogilev शैक्षणिक संस्थान मा इतिहास को संकाय आइपुगे। 1975 मा उनले विशेषता मा उच्च शिक्षा को एक उपाधि प्राप्त "इतिहास र सामाजिक विज्ञान शिक्षक।" जवान विशेषज्ञ को वितरण मा उहाँले Komsomol समिति को सचिव को स्थिति मा माध्यमिक विद्यालय № 1 धेरै महिनाको लागि काम जहाँ Shklov को शहर, पठाइएको थियो। त्यसपछि उहाँले सेना मा मस्यौदा तैयार थियो - 1975 बाट 1977 को लागि त्यो KGB को फ्रंटियर सेना मा सेवा गरे। ऋण मातृभूमि तिर्नको, Lukashenko Aleksandr Grigorevich को Mogilev gorpischetorga को Komsomol समिति को सचिव रूपमा आफ्नो क्यारियर जारी राखे। पहिले नै 1978 मा उहाँले Shklov समाज "ज्ञान" को कार्यकारी सचिव नियुक्त गरियो र 1979 मा कम्युनिस्ट पार्टी सामेल भए।
1985 मा, अलेक्जेन्डर जी अर्को उच्च शिक्षा प्राप्त - यो विशेषता मा बेलारूसी कृषि एकेडेमी स्नातक "कृषि उत्पादन अर्थशास्त्री-आयोजक।"
1982 मा, Lukashenko Aleksandr Grigorevich उहाँले बिरूवा निर्माण सामाग्री को उप निर्देशक रूपमा Shklov, र उहाँले कोलखोज IM को पार्टी समिति को सचिव को काम गर्न खटाइयो कृषि क्षेत्रमा शिक्षा प्राप्त गरेपछि काम 1985 मा 1983 देखि, सामूहिक खेत "ढोल बजाउने व्यक्ति" को उप अध्यक्ष नियुक्त गरियो। वी आई Lenina। 1987 देखि 1994 को लागि, Lukashenko सफलतापूर्वक Shklov जिल्ला मा "Gorodets" भनिन्छ राज्य खेत नेतृत्व छ र छोटो समय मा सामने लाइन गर्न हानि-बनाउने देखि यो बारी व्यवस्थित।
आफ्नो सेवाहरू Lukashenko पार्टी को जिल्ला समिति सदस्य निर्वाचित भएको थियो र मास्को निमन्त्रणा गरिएको थियो सराहना थिए।
मार्च 1990 मा, Alyaksandr Lukashenka बेलारुस को उप निर्वाचित भएको थियो। त्यतिबेला म पहिले नै सोभियत संघ को विघटन को एक प्रक्रिया थियो, र जुलाई 1990 मा बेलारुस को गणतन्त्र एक सार्वभौम राज्य भयो। भविष्यमा राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर Lukashenko देश को लागि यस्तो कठिन समयमा व्यवस्थित छ एक शानदार क्यारियर राजनीतिज्ञ बनाउन। तिनले मानिसहरूको प्रतिष्ठा, न्याय को लागि एक लडाकु एक रक्षक सिर्जना भ्रष्ट सरकार संग युद्ध गर्न गए। आफ्नो पहल मा, प्रारम्भिक 1991 मा, उनले प्रधानमन्त्री Kebich द्वारा खारेज भएको थियो, र केही महिना पछि अंश स्थापित "बेलारुस मा कम्युनिस्ट डेमोक्रेट।"
लेट 1991 मा उप Lukashenko को Belovezhskaya सम्झौताहरू स्वीकृति विरुद्ध मतदान गर्ने मात्र थियो।
1993 मा, Aleksandra Lukashenko सरकारलाई आलोचना र विरोधको विशेष गरी उच्चारण भयो। यस समयमा, यसको लागि सर्वोच्च परिषद्को अस्थायी समिति सेट अप निर्णय थियो भ्रष्टाचार विरुद्ध लडाई र यसको अध्यक्ष Lukashenko नियुक्त। अप्रिल 1994 मा, राजीनामा निम्न Shushkevich Stanislav आयोग खोजहरू पूरा रूपमा निर्मूल।
बेलारुस को गणतन्त्र को राष्ट्रपति
को भ्रष्ट शक्ति संरचना पर्दाफास गर्न गतिविधि अलेक्जेन्डर Lukashenko यो त त्यो राज्य मा उच्चतम पोस्ट भर्न आफ्नो उम्मीदवारी पेश गर्न फैसला गरेको छ कि लोकप्रिय बनाएको छ। जुलाई 1994 मा, Aleksandr Grigorevich Lukashenko (फोटो लेख मा प्रस्तुत छ), को मत को असी भन्दा बढी प्रतिशत प्राप्त, बेलारुस को राष्ट्रपति थिए।
संसद मा संघर्ष
अलेक्जेन्डर जी कार्यालय लिइरहेको पछि, राष्ट्रपति सरासर को बेलारूसी संसद संग लड्न थाले। धेरै पटक उहाँले सर्वोच्च परिषद द्वारा पारित, विशेष व्यवस्था मा बिल साइन इन गर्न इन्कार गरे "बेलारुस सर्वोच्च सोभियत मा।" तर प्रतिनिधि यो व्यवस्था को शक्ति मा प्रवेश, बेलारुस राष्ट्रपति को गणतन्त्र को कानुनी मान्यता अनुसार एक कागजातमा एउटा हस्ताक्षर राख्न सक्छ कि बहस, गरेका Sun. द्वारा अनुमोदित
फेब्रुअरी 1995 मा, संसद मा द्वन्द्व जारी राखे। बेलारुस अलेक्जेन्डर Lukashenko को अध्यक्ष (को संसदीय चुनाव साथ) प्रस्ताव गरेको छ मई 14 मा र एक referendum पकड। र को एकीकरण बारे मानिसहरूको राय पत्ता लगाउन बेलारुस को अर्थव्यवस्था र रूस, राज्य प्रतीक को प्रतिस्थापन। यो पनि औपचारिक रूसी दोस्रो आधिकारिक भाषा बनाउन, र Sun. भंग गर्न राष्ट्रपति लागि मौका प्रदान प्रस्तावित थियो के रोचक छ, यो हप्ताको लागि सर्वोच्च परिषद भंग गर्नु गर्न प्रस्तावित छ। रूसी संघ संग एकीकरण मा, र संसद बैठक हल मा Lukashenka को कार्यहरू विरोध भोक हड्ताल मंचन - सांसदहरु को प्रस्ताव मात्र एक अध्यक्ष छ समर्थित। चाँडै यो भवन mined छ, र दङ्गा प्रहरी सेवा सबै प्रतिनिधि परिसर छोड्न गरे रिपोर्ट थियो। बेलारुस को अध्यक्ष को दङ्गा प्रहरी प्रतिनिधि सर्वोच्च परिषद को सुरक्षा को लागि उनलाई पठाइएको थियो बताए। उत्तरार्द्ध प्रहरी तिनीहरूलाई रक्षा गर्न असफल दावी र अचाक्ली अध्यक्ष को आदेश मा कुटपिट।
फलस्वरूप, यस योजना referendum ठाउँ लिन गरे, Lukashenka सबै प्रस्ताव मानिसहरूले समर्थित थिए।
रूस संग Rapprochement
रूस र बेलारुस - आफ्नो राजनीतिक गतिविधिहरु Aleksandr Lukashenko को धेरै सुरुदेखि उहाँले सहोदर अमेरिका को convergence द्वारा निर्देशित थियो। आफ्नो इरादा, उहाँले 1995 मा रूस संग भुक्तानी स्थापना र भन्सार संघ मा सम्झौताका साइन पुष्टि, त्यसै वर्ष को फेब्रुअरी मित्रता र सहयोग राज्य बीचमा र रूसी संघ, समुदाय र 1996 मा बेलारुस को गणतन्त्र स्थापना।
बेलारुस, काजकस्तान, किर्गिस्तान र रूस - मार्च 1996 मा पनि पूर्व सोभियत संघ को मानवीय र आर्थिक क्षेत्रहरु को एकीकरण मा एक सम्झौतामा हस्ताक्षर।
Aleksandr Lukashenko आफ्नो हात मा सबै शक्ति ध्यान गर्न खोजे। यो अन्त गर्न, अगस्त 1996 मा, त्यो मान्छे पहिले नोभेम्बर को दोस्रो referendum सातौं दिन पकड र नयाँ मस्यौदा संविधान को ग्रहण विचार गर्न एक प्रस्ताव देखियो। देश Lukashenko को मुख्य दस्तावेज गरिएका छन् भनेर परिवर्तन अनुसार, बेलारुस एक मा गरिएका राष्ट्रपति गणतन्त्र, तर राज्य को टाउको व्यापक शक्तिहरु सक्दछन्।
संसद नोभेम्बर 24 मा एक referendum को होल्डिंग सौतेली र विचार को लागि आफ्नो मस्यौदा संविधान सुझाव। एकै समयमा धेरै दल नेताहरू Lukashenko र संवैधानिक अदालत impeaching लागि हस्ताक्षर सङ्कलन गर्न सँगै सामेल देशको मुख्य व्यवस्था परिवर्तन मा एक referendum को होल्डिंग प्रतिबन्धित। आफ्नो लक्ष्यमा आफ्नो बाटो मा अलेक्जेन्डर जी आमूल उपाय गए - केन्द्रीय निर्वाचन आयोग Gonchar को अध्यक्ष खारेज, प्रधानमन्त्री Chigir को राजीनामा र भंग संसद को योगदान गरे।
को referendum को निर्धारित मिति मा भएको थियो, मस्यौदा संविधान अनुमोदित। यो Lukashenko आफ्नो हात मा सबै शक्ति ध्यान गर्न अनुमति दिएको छ।
विश्व समुदाय 1996 मा बेलारूसी referendum को परिणाम पहिचान गर्न अस्वीकार गरेको छ। Lukashenko लगभग सबै संसारको राज्य को शत्रु भयो, उहाँले तानाशाही व्यवस्थापन शैली आरोप थियो। आगो गर्न इन्धन यसलाई आफ्नो निवास देखि evicted गरिएको छ 22 देशहरूको बेलारूसी अध्यक्ष राजनयिकहरुलाई को सहभागिता बिना हुँदा "ब्ल्याक" भनिन्छ मिन्स्क जटिल मा घोटाले पोखे। Lukashenko, राजदूतको विरुद्ध आफूलाई भर्नको आरोप दुनिया संसार देशहरूको संख्या मा बेलारुस को राष्ट्रपति प्रवेश निषेध भने के।
Lukashenko पश्चिम र राष्ट्रपति आफूलाई आरोप जो बेलारुस मा विरोध राजनीतिज्ञ को disappearances, संग सम्बन्ध बलियो बनाउन भएन।
बेलारुस र रूसी संघ बीचको सम्बन्ध सन्दर्भमा, दुवै अमेरिका आपसी प्रतिज्ञा दिन र rapprochement दृश्यात्मक बनाउन जारी, तर वास्तवमा वास्तविक परिणाम एकीकृत राज्य पुगेको छैन सिर्जना गर्न। 1999 मा, Lukashenka र Yeltsin संघ राज्य स्थापना एक सन्धि हस्ताक्षर गरे।
2000 मा, बेलारुस को राष्ट्रपति सबै prohibitions बाबजुद संयुक्त राज्य अमेरिका, भ्रमण र "मिलेनियम शिखर सम्मेलन" मा बोल्नुभयो। Lukashenko, युगोस्लाभिया मा नेटो देशहरूमा र सैन्य सञ्चालन आलोचना भएको अवैध र अमानवीय कार्यहरू केही देशहरूको अधिकारीहरु आरोप लगाए।
दोस्रो र तेस्रो राष्ट्रपति सर्तहरू
सेप्टेम्बर 2001 मा, त्यो राष्ट्रपति Lukashenko रूपमा दोस्रो अवधि थाले। त्यतिबेला, बेलारुस र रूस बीचको सम्बन्ध झन् तनावपूर्ण हुँदै गइरहेका छन्। दुई कुनै कारणको लागि एकजुट भएको समुह देशहरूको नेताहरूले व्यवस्थापन मुद्दाहरू समझौता समाधान पाउन असमर्थ थिए। Lukashenko मित्र पुटिन एक मजाक रूपमा कथित र बेलारुसी राष्ट्रपति अपिल गर्ने छैन कि युरोपेली एकीकरण ढाँचा को विचार प्रतिक्रिया अगाडि राख्न बारी मा राज्य नेतृत्व प्रस्ताव। एकल मुद्रा को परिचय विषयमा विवादास्पद मुद्दाहरू पनि कुनै समाधान फेला परेन।
स्थिति aggravated थियो र "ग्याँस" भ्रष्टाचार। बेलारुस, मास्को गर्न ग्याँस आपूर्ति र आपूर्ति को पछि समापन कमी Lukashenka को भाग मा आक्रोश कारण। उहाँले यदि रूस अवस्था सुधार छैन, बेलारुस यो सबै अघिल्लो सम्झौताहरू आंसू बताए।
दुई देशहरू बीचको सम्बन्ध को इतिहास द्वन्द्व परिस्थिति धेरै थियो। ग्याँस घोटाले साथै, 2009 मा, वहाँ एक तथाकथित "दूध संघर्ष", मास्को रूस गर्न बेलारूसी डेयरी उत्पादन को आयात प्रतिबन्धित थिए। त्यहाँ Lukashenko बेलारुस मा बेच्न बाह्र रूसी डेयरी बिरुवाहरु चाहँदैनथे भन्ने तथ्यलाई dissatisfaction एक इशारा थियो अनुमान छ। राष्ट्रपति Lukashenko को प्रतिक्रिया रूसी संघ संग तत्काल भन्सार सीमा मा परिचय र सिमाना नियन्त्रण लागि CSTO र मुद्दा निर्देशन को सरकारको टाउको को शिखर boycotting गरिएको छ। मास्को र मिन्स्क बीच वार्ता, यो रूस गर्न बेलारूसी डेयरी उत्पादन को आपूर्ति फेरि सुरु गर्न निर्णय थियो नियन्त्रण, जुन 17 मा शुरू भएको थियो, तर त्यही दिन र रद्द गरियो।
2004 मा, बेलारूसी अध्यक्ष एउटै व्यक्ति दुई लगातार सर्तहरू गर्न राष्ट्रपतिको पद गर्न निर्वाचित गर्न सकिन्छ भनेर बताउँदै प्रबन्ध repealed थियो परिणाम जो अर्को referendum, सुरु भएको छ। परिणाम र referendum संयुक्त राज्य अमेरिका र पश्चिमी युरोप को लिङ्कमा थिएनन्, र तिनीहरूले Lukashenka र बेलारुस विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध को एक श्रृंखला शुरू गरेका छन्।
बयान राइट Kandolizzy बेलारुस मा तानाशाही पक्कै लोकतन्त्र बदलिएको पर्छ भनेर, अलेक्जेन्डर Lukashenko उहाँले राज्य को क्षेत्रमा पश्चिमी डाकुओं सशुल्क कुनै पनि "रंग" क्रांतियों, अनुमति बताए।
मार्च 2006 मा, अर्को बेलारुस को गणतन्त्र मा आयोजित थिए राष्ट्रपति चुनाव। विजय, को मत को 83% द्वारा ब्याक, फेरि Lukashenko जित्यो। विरोध संरचना र केही देशहरूमा चुनाव परिणाम पहिचान छैन। सायद किनभने आफ्नो राज्य को बेलारूसी राष्ट्रपति भलाइ सधैं Paramount छ। उहाँलाई लागि, नागरिक समर्थन - कि के यहाँ महत्त्वपूर्ण छ उच्चतम सम्मान र पहिचान छ छ। डिसेम्बर 2010 मा, अलेक्जेन्डर Lukashenko, को मत को 79.7 प्रतिशत प्राप्त निर्वाचित चौथो पटक अध्यक्ष थिए।
बेलारुस Aleksandra Grigorevicha Lukashenko को राष्ट्रपतिको पद को बीस वर्ष आर्थिक वृद्धि को उच्चतम दर केही हासिल गर्न सक्षम भएको छ। बेलारुसी अध्यक्ष, सबै अमेरिकी र ईयू प्रतिबंध बाबजुद, कृषि, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ईन्जिनियरिङ् र तेल शोधन उद्योग को भग्नावशेष बाट जुटाउने संरक्षण र घरेलू उद्योग औद्योगिक उत्पादन विकास गर्न, संसारको धेरै देशहरूमा राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्षम थियो।
परिवार Lukashenko Aleksandra Grigorevicha
1975 देखि बेलारुस को अध्यक्ष आधिकारिक Zholnerovich Galinoy Rodionovnoy गर्न विवाह छ। तर प्रेस जोडी अलग बस्ने गरिएका सिकेका छ। राष्ट्रपति तीन छोराहरू छ। बच्चाहरु Lukashenko Aleksandra Grigorevicha बुबाको पाइला भयो, विक्टर को जेठो छोरा, बाहिर राष्ट्रपति राष्ट्रिय सुरक्षा adviser, बीचमा छोरा, दिमित्री को जिम्मेवारी वहन राष्ट्रपति खेल क्लब को केन्द्रीय परिषद को अध्यक्ष पनि छ।
कान्छो छोरा Nikolai - एक बिहे नभएको बच्चा। एक संस्करण अनुसार, केटा आमा छ Abelskaya Irina, एक पूर्व व्यक्तिगत चिकित्सक Lukashenko परिवार। मिडिया राष्ट्रपति सबै सरकारी घटनाहरू र पनि सैन्य parades आफ्नो कान्छो छोरा मा देखिने उल्लेख गरे। मिडिया फैलाउन Lukashenko को राष्ट्रपतिको पद गर्न Nikolai तयार छ भन्ने जानकारी, तर उहाँले Alyaksandr Lukashenka को अफवाहहरु भनिन्छ "अर्थहीन।" बच्चाहरु Aleksandra Lukashenko, आफ्नो शब्दमा, जीवन को आफ्नो बाटो चयन गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ।
बेलारुस सात नातिनातिनी को अध्यक्ष: चार - भिक्टोरिया अलेक्जेन्डर, वेलेरिया र Jaroslav - बच्चाहरु जेठो छोरा विक्टर, तीन - Anastasia, Daria र अलेक्जेन्डर - दोस्रो छोरा, Dmitri छोरी। आफ्नो नातिनातिनी गर्न धेरै ध्यान - कि यो निःशुल्क समय Lukashenko Aleksandr Grigorevich को निर्धारण मा एक प्राथमिकता गरे के।
राष्ट्रपति पत्नी र सबै नीति, Lukashenka को आग्रह मा टाढा परिवार, लगभग प्रेस कुरा कहिल्यै।
Chernyshev Mihail Anatolevich: जीवनी
जीवनी तातियाना Golikova। रोचक तथ्य र सुविधाहरू
युरोपेली संघ: समुदाय को संरचना विस्तार हुनेछ?
चेक गणतन्त्र मा निवास परमिट: एक निवास परमिट रूसी प्राप्त गर्न कसरी
मोइबिअस सिंड्रोम: फोटो, लक्षण, निदान, उपचार
यो पानीको साघुरो भाग खाडी फरक छ? डेविस Strait: स्थान, विशेष गरी
Lou Gehrig रोग, यसको लक्षण र उपचार
"किफायती लाख।" परियोजना बारे समीक्षा
तुलना फोन frameless BLUBOO S1 र Samsung S8
व्लादिमीर: नाम र रूपको मान। नाम व्लादिमीर को मूल
किया Ceed GT: वर्णन, विनिर्देशों, र मालिकको समीक्षा